ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၄-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၄-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ဆိုက်ပရပ်စ် ရွှေထုတ်ရောင်းတဲ့ ဂယက် မြန်မာဈေးကွက် လာရိုက် click
- ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ကျဆင်းမှုကြောင့် မြန်မာ့ရွှေဈေး ထိုးကျ click
- ထူးထူးကဲကဲ မြန်မာ့ရွှေဈေးကျတာ မတွေ့ဖူးဘူး (မေးမြန်းခန်း) click
- ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှ ဝတ္တုငွေနှင့် လှူဖွယ်များအား ဒေသခံများ ကန့်ကွက် click
- မဒေးကျွန်းဒေသခံများ တရုတ်ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒပြ click
- မဒေးကျွန်း ဒေသခံများ CNPC ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒပြပြီ click
- ကျောက်ဖြူ မဒေးကျွန်းမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ CNPC ကို ဒေသခံတွေ ၀ိုင်းဝန်းဆန္ဒပြပြီ click
- ရှမ်းတပ်နဲ့အစိုးရ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်၊ ရွာသား ၂ ဦး ထိမှန် click
- မြန်မာပြည်အရေး OIC ပါဝင်ရန် မလိုအပ် click
- ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက OIC အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေကို တင်ပြခဲ့ပါသလဲ click
- မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ အီးယူက ရုပ်သိမ်းပေးဖွယ်ရှိ click
- EU ဖြေလျှော့ပါက စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း သေချာစွာ ရယူရန် လိုအပ် click
- သမ္မတ ဖြစ်ချင်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- ဒီချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရန် ၈၈ လုပ်ဆောင် click
- PNLO ဥက္ကဋ္ဌ အနားယူ၍ လူငယ်များဖြင့် အစားထိုးလို click
- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို သက်ဆင် သင်္ကြန် အတာရေလောင်း click
- သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ၂၆ ဦး သေ၊ ၁၈၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ click
- ထူးထူးခြားခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ click
- ၁၅၀၀ တန် SIM ကတ်ကို ရပ်ကွက်များတွင် မဲဖောက် ရောင်းချသွားမည် click
- နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကို ဖုန်းဆင်းကတ် အချိုးကျ ရောင်းချပေးမည် click
- ရေထွက်ကုန်များ လက်ခစားစနစ်ဖြင့် လုပ်ပါက ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်ကို ပြိုင်ရမည် click
- ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမှတ်တမ်းများကို လစဉ် ကောက်ယူသွားတော့မည် click
- ကျောက်တော် မဟာမုနိကုန်းတော်တွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ စေတီတဆူ တည်ဆောက်နေ click
- ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ရခိုင်သချိုင်း အလုခံရ click
- ရခိုင်သင်္ကြန်ပွဲတော် မြို့နယ်အချို့တွင်သာ လွတ်လပ်စွာ ကျင်းပခွင့် ရခဲ့ click
- သင်္ကြန်လည်တဲ့ စက်လှေ လေးမြို့မြစ်အတွင်း နစ်၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ် ၃ ဦး သေဆုံး click
- လှိုင်သာယာ လမ်းမပေါ် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု ဖြေရှင်းပေးသူ မရှိသေး click
- မြန်မာသတင်းသမားများ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံပြပွဲ ပြုလုပ်မည် click
- တိုင်းပြည် ထူထောင်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒပဲ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ဦးဇော်ဇော် (အင်တာဗျူး) click
- ဒါနရှင်များ ခင်ဗျား (ကာတွန်း) click
- အိုဘားမားထံ ပို့သည့် `မသင်္ကာဖွယ်´ စာအိတ်ကို ကြားဖြတ်တားဆီး၊ (ricin) ရိုင်စင်အဆိပ် တွေ့ရှိ click
- အမေရိကန်သမ္မတထံ အဆိပ်ပါသည့် စာ ပေးပို့သူကို ဖမ်းဆီး click
- အာဖဂန်မှာ နွေဦးအ၀င် ကဗျာအခမ်းအနား ကျင်းပ (အသံ) click
- ဗုံးမခွဲနိုင်တဲ့ စာသင်ကျောင်း (အက်ဆေး) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:16 PM
၂၀၁၃ သင်္ကြန်မှာ ရန်ကုန်မှာ လိုင်းကား ၂၀၀၀ ကျော် ဆွဲပေးပါမယ်၊ ယခင်ဈေးအတိုင်း ပါ၊ ပိုတောင်းရင်ပြင်းထန်စွာ အရေးယူမယ်
လို. ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ကြိုတင်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်ကြေညာခဲ.တယ် ၊ အကျနေ.က လှိုင် – စော်ဘွားကြီးကုန်းကို ၅၀၀ ကျပ် (၅ဆ) ၊
စော်ဘွားကြီးကုန်း – ပဲခူး = ၂၀၀၀ ကျပ် (၂ဆ) ၊ ပေးစီးရတယ်၊ ကားခ မပေးနိုင်လို.စပယ်ယါကကားပေါ်ကမောင်းချခံရသူတွေ အများကြီးပါ ။ရန်ကုန် မှာ သင်္ကြန်တွင်း ကားခတွေ အဆမတန်ပေးရတယ်၊
ယာဉ်စီးခကို သင်္ကြန် ၃ -၄ ရက်မတက်အောင်တောင်မထိန်းနိုင်ရင် ရန်ကုန်တိုင်းကို
မှာလည်း ဈေးသည် တွေနဲ. ၊ သင်္ကြန်လည်သူ တွေရဲ. ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ်တွေကြောင်. သင်္ကြန် ပြီး မစင်ပုံတွေ ခြုံအနှံ.မှာ မြင်မကောင်းဘဲ ၊ ၂လ ကျော်လောက်မှ မစင် အနံ.အသက်တွေ ပျောက်မှာ ။
သမ္မတကြီး က ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို ဘာကိုကြိုက်လို.ခန်.ထားမှန်း မသိပါဘူးဗျာ ။
အရည်အချင်းမရှိ ၊ အလုပ်လည်း မလုပ်တဲ.သူ ပါ ၊